सलाम छ रूपा तिमीलाई, यिनै हुन जसले माईती छोडिन् तर २ हात र एक खुट्टा काटिएका आफ्नो श्रीमान छोडिनन् (भिडियो सहित) – News Mala
January 7, 2019 Debraj Kandel समाज/बिबिध 1
यसैबिच बिदेशबाट ऋषि जीको कल आयो । सर, कुलेश्वरमा २१ बर्षका यस्ता युवा छन्, जस्को २ हात र १ खुट्टा छैनन्, मात्र एक बर्ष अगाडि अन्तरजातीय बिहे गरेको, बा, आमाले पनि सानैमा छोडेर गए, बिजोग छ, हजुरहरुले भिडियो बनाएर अपिल गर्दिनुहुन्थ्यो कि ? मैले नाई भन्ने कुरै थिएन, हामीले गर्दै आईरहेका पनि त्यहि थियौं ।
समय मिलाएर कुलेश्वर हाईट जांदा कृष्ण वलिकी श्रीमती रुपा पुलामी मगर वलि हामीलाई बाटोसम्म लिन आईन् । घरमा पुग्दा बुढी हजरआमासंग सोफामा बसिरहेका थिए, कृष्ण । कलिलो अनुहारका कृष्ण मलाई देखेर मुस्कुराए, दाई तपाईकै फिल्म लभ सब हेर्दै थिए, कस्तो कमेडी रैछ, भने । कृष्णलाई देख्ने बित्तिकै सबै दुखी, पिडित देख्दा अर्कै भावमा डुबिहाल्ने मेरो मन त्यतैतिर डुव्यो । कृष्णको कथा जान्न आतुर थिएं ।
चिया पिएर कुराकानी सुरु गर्दा, कृष्णले आफ्ना सबै कथा सुनाए । उनले कसरी गुमाए त दुई हात र एक खुट्टा ? कृष्णकी श्रीमती अन्तर्वार्तामै रुदा मैले पनि आफुलाई सम्हाल्नै सकिन, आंशु आंखाको डिलसम्म आयो । कस्तो पिडा, पहिला बाबाले छोडे पछि आमाले ।
सानैदेखि मामाघरको हजुरआमाले हुर्काए, कृष्णलाई । जब ठुलो भए यस्तो घटना घट्यो । प्रेम गरेपछि अन्तरजातिय बिवाह गरेका रुपा र कृष्णको प्रेम कथा पनि मेरै फिल्मको सुटिंगबाट सुरु भएको रहेछ । हामी तपाईको बिर्खेलाई चिन्छस् फिल्मको सुटिंग हेर्न जांदा पहिलो पटक कुराकानी गरेको नि, रुपाले सुनाईन् ।
कृष्णको हात र खुट्टै काट्नु पर्ने घटना के थियो ? किन सानैमा छोडेका थिए, कृष्णलाई उनका बाबु आमाले ? कसरी सम्भव भयो, कृष्ण र रुपाको अन्तरजातिय बिवाह ? अनि समाजले किन भन्दैछ रुपालाई, कृष्णलाई छोड्दे ?
बिस्वलाइ जितेका बडी बिल्डर महेश्वर महर्जन र मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा यसरी भए सम्मानित
नेपालमा भर्खर 3G बाट अपग्रेड भएर 4G इन्टरनेट चल्दैछ, तर यो देश पहिलो देश हुने छ जसले 6G तयारी सुरु गर्य